သားသားမီးမီးတွေကို ဘယ်လို Potty Train ပေးမလဲ? - Chit MayMay
Home Parenting Child Teaching သားသားမီးမီးတွေကို ဘယ်လို Potty Train ပေးမလဲ?
မေမေတို့ ကလေးငယ်တွေကို အိမ်သာအသုံးပြုနည်း သင်ပေးခြင်းက သူတို့ကို ပိုမိုလွတ်လပ်စေရုံသာမက သူတို့လေးတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် အရေးပါသော မှတ်တိုင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ ကလေးလေးတွေ ၂နှစ်လောက်ဆိုရင် potty training (အိုးနှင့် အီအီးပါတတ်စေရန် လေ့ကျင့်ပေးမှု) ပြုလုပ်ပေးလို့ရနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကလေးတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ကလေးတွေဆိုရင် သူ့အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားထက် နောက်ကျပြီးမှသာ လေ့ကျင့်ပေးလို့ရပါတယ်။ အရေးကြီးတာက မေမေတို့ကလေးဟာ potty training ဖို့အတွက် အဆင့်သင့်ဖြစ်နေတာ သေချာရပါမယ်။ ကလေးတိုင်းက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူကြပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးကို အိမ်သာအိုးနဲ့ လေ့ကျင့်ပေးဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီလား/မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာ သေချာစေဖို့ အောက်ပါလက္ခဏာလေးတွေ ရှာဖွေရပါမယ်။
မေမေတို့ကလေးက potty (အိမ်သာအိုး) ကိုအသုံးပြုဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ လက္ခဏာတွေ ပြသနေတယ်၊ ပိုပြီးလွတ်လပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေတယ်။
မေမေတို့ကလေးက ဆီးသွားခြင်း (သို့) ဝမ်းသွားခြင်းအကြောင်းကို စပြောတတ်နေပြီ ၊ မျက်နှာအမှုအရာဖြင့် ပြနေတတ်ပြီ။
ကလေးက အဆင်မပြေသလို ခံစားရတာကြောင့် ညစ်ပတ်နေတဲ့ ဒိုင်ဘာကို မဝတ်ချင်တော့ဘူး
ကလေးက အချိန်ကြာကြာ( ၁နာရီ (သို့)၂နာရီ) ခြောက်သွေ့နေပြီဆိုရင်၊ ဒိုင်ဘာလဲရတာ နည်းလာပြီဆိုရင်
မေမေတို့ကလေးက အခြေခံညွှန်ကြားချက်တွေကို လိုက်နာနိုင်ပြီဆိုရင်
ကလေးက ဆီးသွား၊ ဝမ်းသွားဖို့ အကြာကြီးထိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်
ဒီဖြစ်စဉ်ကို မတွန်းလှန်ဘဲ မေမေတို့ကလေး အဆင်သင့်ဖြစ်လာတဲ့အထိ စောင့်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်း သတိရပါ။ စိတ်ရှည်သည်းခံပါ ။ သူတို့ကို စသင်ပေးဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတယ်ဆိုရင်တောင် သူတို့ရဲ့ စေ့ဆော်မှုနဲ့ ဦးဆောင်ပါစေနော်။ ဒါ့အပြင် ဆီးထွက်ကျတာမျိုးစတဲ့ မတော်တဆတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ အပြစ်ပေးတာမျိုးက ကလေးကို စိတ်ဓါတ်ကျစေနိုင်တာကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ထိရောက်သော အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ကြောင်း သတိပြုရပါမယ်။
လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ရယူပါ – မေမေတို့ကလေးကို potty ပဲသုံးစေချင်သလား? ဒါမှမဟုတ် toilet seat ပေါ်မှာပဲ လုံခြုံစွာ ထားနိုင်တဲ့ potty seat ပဲသုံးမလား ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပါ။ သို့သော် ပထမတစ်ခုက ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူရွှေ့လို့ရပြီး ကြောက်စရာနည်းနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ခုကတော့ ကလေးအတွက် အန္တရာယ်နည်းနည်းများသလို ခြေတင်ခုံတွေ၊ လှေကားခုံတွေ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကလေး potty ဝယ်တဲ့အခါမှာလည်း အဝမကျယ်တာမျိုးကို ရွေးချယ်ဝယ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြင်ဆင်ပါ – မေမေတို့ကလေး ဝမ်းသွားတဲ့အခါ အသုံးပြုမယ့် စကားလုံးတွေကို စဉ်းစားပါ။ “ညစ်ပတ်တယ်” (သို့) “ရွံ့စရာကောင်းတယ်” စသဖြင့် အပျက်သဘောဆောင်နိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေကို ရှောင်ပါ။ ကလေးကို ပိုသက်တောင့်သက်သာ ရှိစေဖို့အတွက် potty-training song ကိုဖွင့်ပြနိုင်/ဆိုပြနိုင်ပါတယ်။
မေမေတို့ကလေးကို ပြင်ဆင်ပေးပါ – ” potty သွားမယ်”,” ရှူးရှူးပေါက်မယ်”, ” အင်အင်းပါမယ်” ကဲ့သို့သော စကားလုံးအချို့ကို သင်ပေးထားပါ။ potty (သို့) toilet က ဘာအတွက်လဲ ဆိုတာကို ကလေးနားလည်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ Potty ထဲကို ညစ်ပတ်နေတဲ့ ဒိုင်ဘာထည့်ပြတာမျိုး၊ ကိုယ်အိမ်သာသုံးနေချိန်မှာ ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြတာမျိုး၊ သူတို့ကို စောင့်ကြည့်ခွင့်ပေးတာမျိုးက ကောင်းပါတယ်။
ကလေးရဲ့ အစားအသောက်ကို သတိပြုပါ – ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားဖို့ အမျှင်ဓါတ်နဲ့ ရေများစွာ ပါဝင်ဖို့ သေချာရပါမယ်။ မဟုတ်ရင် potty training ကိုခက်ခဲစေပါတယ်။
potty ထားဖို့အတွက် အဆင်ပြေတဲ့နေရာကို ရွေးပါ – ရေချိုးခန်းလိုနေရာမျိုးမှာ potty သုံးရတယ်ဆိုတာ ကလေးအား ကောင်းစွာနားလည်စေနိုင်တာကြောင့် ရေချိုးခန်းက အကောင်းဆုံးနေရာလို့ ထင်ရနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် မေမေတို့ကလေးရဲ့ အိပ်ခန်း (သို့) ကစားခန်းမှာ ထားပေးတာက အလွယ်တကူ တတ်လို့ ရနိုင်စေပါတယ်။
၁။ ကလေးကို သင့်လျော်တဲ့ အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ဆင်ပေးပါ
ကလေးကို သင့်တော်တဲ့ အဝတ်အစား ဝတ်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ချွတ်ရခက်တဲ့ အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ပေးတာမျိုး ရှောင်ပါ။
၂။ ဘောင်းဘီချွတ်တာ,ဝတ်တာ သင်ပေးပါ
ကလေးကို ဒိုင်ဘာမလဲပေးခင်မှာ သူတို့ဘောင်းဘီတွေ ဆွဲချွတ်ခိုင်းပါ ပြီးရင် ပြန်ဆွဲတင်ခိုင်းပါ။
၃။ potty အသုံးပြုနည်း သင်ပေးပါ
ကလေးကို ဘယ်လို ထိုင်ထလုပ်ရတယ်ဆိုတာ သရုပ်ပြပါ။
၄။ ကလေးကို လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်အောင် ပုံမှန်လေ့ကျင့်ပေးပါ
အိမ်ပြင်ထွက်ဖို့ မလိုအပ်တဲ့နေ့မှာ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ပါ မနက်အိပ်ရာနိုးပြီး (သို့) အရည်များများသောက်ပြီး တစ်နာရီခန့်အကြာမှာ potty ပေါ်ထိုင်ခိုင်းပါ။
၅။ အစာစားပြီး ၁၅မိနစ်မှ မိနစ် ၃၀အတွင်း ကလေးကို potty အသုံးပြုဖို့ အားပေးပါ
gastro-colic reflex လို့လည်းခေါ်တဲ့ အစာစားပြီးနောက် တုံ့ပြန်မှုအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သဘာဝအူလှုပ်ရှားမှုရဲ့ အားသာချက်ကို ယူလို့ရပါတယ်။
၆။ ကလေးအား စိတ်အေးလက်အေး ခံစားရစေပါ၊ အဆိုးမြင်စိတ်တွေကို ရှောင်ရှားဖို့ ကူညီပါ
potty ပေါ်ထိုင်နေစဉ်မှာ ကလေးအား သူတို့နှစ်သက်ရာစာအုပ်ကို ပေးထားပါ။ (သို့) အိမ်သာသွားခြင်းအကြောင်း ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ပြပါ။ ဒါက သူတို့ကို အချိန်ကုန်အောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ကလေးက ၅မိနစ်ကြာလို့မှ ဆီးမသွားရင် potty ကိုဖယ်ထားလိုက်ပါ၊ အကြာကြီးထိုင်ခိုင်းတာက ပြစ်ဒဏ်ပေးသလို ခံစားရစေပါတယ်။
၇။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုကို မမေ့ပါနဲ့
မေမေတို့ကလေးက သူတို့အောက်ပိုင်းကို ဘယ်လိုသန့်စင်ရမယ်ဆိုတာ သိရှိတဲ့အထိ သူတို့ကို အောက်ပိုင်းသန့်စင်ပေးပါ။ ရှေ့မှ နောက်သို့ သန့်စင်သင့်တာကို သတိပြုပါ။ ဒါ့အပြင် ကလေးတွေကို ဆီးသွား ၊ ဝမ်းသွားပြီးတိုင်း လက်ဆေးတဲ့ အလေ့အထကို သင်ပေးပါ။
Previous article၆ လပြည့်ပြီးတဲ့ ကလေးတိုင်း လိုအပ်တဲ့ အာဟာရနဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေဖို့ ကျွေးသင့်တဲ့ ဖြည့်စွက်အစားအစာ ( ၅ )မျိုး
Next articleဆယ်ကျော်သက်တွေကို အုပ်ထိန်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူမှ ပြောမပြခဲ့သော အကြောင်းအရာများ